ढल्यो खम्बेचौरको लोकतान्त्रिक रूख !
 फणीन्द्र फुँयाल ज्वाला
केही दिनअघि सिन्धुलीको खम्बेचौर अर्थात् लोकतान्त्रिक चौरको गुलमोहरको रूख डोजर लगाएर रातारात ढालियो । रूख हुँदाको भन्दा ढालिएपछि यस क्षेत्रमा चर्चा–परिचर्चा चुलिएको छ । ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि सिन्धुलीको पुरानो हाटेचौरलाई ‘लोकतान्त्रिक चौर’को रूपमा न्वारान गरिएको थियो ।
रूख वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हो । ‘रुख रोपौँ, हरियाली जोगाऔँ, रुख रोपौँ भूक्षय रोकौँ, रुख रोपौँ वातावरण सफा पारौँ’ जस्ता अनेकौँ नारा हामीले जान्दैदेखि सुन्दै, पढ्दै र लेख्दै आएका हौँ । एउटा रूख काटिनु त्यति ठूलो कुरा होइन तर आज त्यही रूखको व्यापक चर्चा हुँदैछ सिन्धुलीमा ।
गुलमोहरको रूख काटिनु एउटा संयोग हो । खाँट्टी कुरो चाहिँ अर्कै छ । रूख काटेर यस ठाउँमा सिमेन्टको रूख खडा गरिँदै छ । रातारात डोजर चलाएर ढालिएको रूखको स्थानमा अब जुनार फल्ने छ, त्यो पनि सिमेन्टको !
सामाजिक सञ्जालमा बहस, कचहरी जारी छ । कोही भन्छन्, यहाँ सिन्धुलीको पहिचान झल्किने जुनारको स्तम्भ बनाऔंँ, कोही लेख्छन्, जिल्लाका वामपन्थी नेता ऋषि देवकोटा ‘आजाद’को शालिक राखौँ । कोही तर्क गर्छन्, सिन्धुली जिल्ला चिनाउने ‘सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमई कत्तिमा राम्रो दरबार...’ गीतका गायक स्वर्गीय कृष्णविक्रम थापाको शालिक राखौँ । रूख त ढालिसकियो नै तर अब त्यस स्थानमा यो राख्ने कि त्यो राख्नेको विवादले ठूलै रूप लिने सम्भावना देखिएको छ ।
सम्भवतः गुलमोहरको प्रसिद्ध रूख ढालेर सो स्थानमा कमलामाई नगरपालिकाले ठड्याउँदैछ सिमेन्टको जुनार । सायद त्योे सिमेन्टको जुनारले ‘अफ सिजन’मा पनि फलिरहेको सन्देश दिनेछ आगन्तुक र जिल्लावासीलाई ।
जसरी प्रत्येक मानिसको आफ्नो पहिचान र स्वभाव हुन्छ त्यसैगरी प्रत्येक देश, प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक जिल्ला, गाउँ, टोल र गल्लीको पनि आफ्नो विशेषता र पहिचान हुन्छ । आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रको पहिचान झल्काउने काम पनि स्थानीय जनता र प्रतिनिधिहरूकै हो । तर त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र सामूहिक निर्णय लिएर काम गर्दा त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र मान्यतापूर्ण संस्कारको विकास हुने थियो ।
यदि त्यही खम्बेचौरीमै शालिक बनाउनु थियो भने किन बजारको सौन्दर्यका रूपमा रहेको उक्त चौतारो मासेर स्तम्भ बनाउने निर्णयमा नगरपालिका पुग्यो ? चौतारो नमासी नै त्यसैको छेउमै स्तम्भ बनाउन पनि त सकिन्थ्यो । चौतारोले दिएको सौन्दर्य शालिकले पक्कै दिन सक्दैन । शालिक र चौतारोको आफ्नै पहिचान छ र बेग्लै छ ।
चौतारोमा डोजर लागिसक्यो । गुलमोहर मरिसक्यो । कंङ्क्रिटयुक्त संरचनाको निर्माण नै विकास हो भन्ने मान्यताले गर्दा पर्यावरण सङ्कटमा पर्दै गएको छ । यतिबेला देशका अधिकांश पहाडी जिल्लामा कतै लालीगुराँस, बिरालो, काउली, एभोकाडो, लसुन, तोङ्वा त कतैँ कलश, गौँडा लगायतका शालिक निर्माण भएका छन् । ती संरचनाले आफ्नो पहिचान स्थापित त गरेका छन् नै तर त्यस्ता संरचना निर्माण गर्नका खातिर दोबाटो, पार्क वा बगैँचामा रोपिएको रूख ढाल्नु, चौतारो मास्नु कति शोभनीय हुन्छ ? यतिबेला स्थानीयले यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्– गुलमोहर किन काटियो ?
(लेखक, पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)